Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 2aad
You are here: Home Home Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 2aad
Isla sannadkaas waxa ku dhashay magaalada Hargeysa Axmed Cali Haaruun oo loo yaqaannay ‘Dararamle’ oo ay Feysal Cumar Mushteeg qaybo badan oo nololeed wadaageen, gaar ahaan fanka. Waxa kale oo uu sannadkani I xusuusinayaa in ay dhalatay, naxariistii Janno Alla ha ka waraabiyo e’, walaashay Ruqiya-Caneb Yuusuf Ducaale, oo 14kii Diisambar, 2010kii ku dhimatay laguna aasay Jabuuti.
Sida ay saaxiibbadii beryahaa la noolaa ii sheegeen in uu ka qayb-geli jiray oroddada qudhooda. Feysal Cumar Mushteeg, wuxu ka hawl-galay xafiiskii xannanada xoolaha ee Burco. Beryahaas ayuu bilaabayaa silsiladdiisii heesaha ahayd ee uu ku qaadi jiray codka ‘Subcis’. Dareen beryahaa ka dhashay ayuu ka tirinayay ereyadaa mahadhada reebay, markii danbena hal-ku-dhegga noqday.
Carruur ayaan ahaa maa daama aan dugsiga dhexe ka bilaabay Axmed gurey sannadku markii uu ahaa 1959kii lixdii bilood ee danbe. Waxaan xusuustaa in aan beryahaa ku dhegaysan jiray guriga walaalkay Axmed Yuusuf Ducaale. In kasta oo aanan wada xussuusan, haddana waxaan ka sii hayaa oo weli xiskayga ku keydsan:
‘Parker wuxu ahaa sarkaal xukumayay. Intaa haddii uu yidhi fannaankeennii weynaa ee Feysal Cumar Mushteeg ayaa loo sheegay in uu Burco ka tago oo loo beddelay Bari, waxaanu intaa hore ku kabay:
Laba sannadood ka dib ayuu ka soo baxay tababarkii waxaanu noqday macallin, isaga oo ka soo shaqeeyay meelo badan. Walaalkay Axmed Yuusuf Ducaale wuxu ii sheegay in uu macallin u ahaan jiray. Walaashay Sacdiya (Baarcad) oo aan ku dhalasho xigayna waxay ii sheegtay in uu macallin ugu ahaan jiray dugsigii hoose ee New Hargeysa oo beryaha qaar la odhan jiray “Reece”. Sacdiya-Baarcad waxay ii sheegtay in uu daqiiqadaha hore oo dhan fasalka u heesi jiray. Waxay ii sheegtay in uu mar danbe odhan jiray xamaamkii ma is-taagay, markaa ka dib ayuu xiisadda bilaabi jiray.
Waxa xusuus gaar ah mudan in uu Feysal Cumar Mushteeg heestiisii ugu horreysay oo ‘Subcis’ ahayd u qabtay ama u duubayba Radio Hargeysa, sannadkuu markii uu ahaa 1958kii.
Maalmihii aan fursadda u helay in aan la sheekeysto, ayaa wuxu iiga sheekeeyay magaalada Buraan oo gobolka Sanaag ka tirsan mar loo beddelay. Nolol cusub ayay ku noqotay oo qaadkii iyo maaweeladiisii ayuu waayay. Markaana wuxu yidhi:
“Barbaartaan la bartiyo barigii ka imee,
Buraan ma badday ku taallaa”,
Reer Buraan ayaa isu tegay si ay u sooryeeyaan Feysal Cumar Mushteeg si aanay heesihiisu magac-xumo ugu soo jiidin. Aad ayaa loo sooryeeyay, qaadna waa loo keenay, maalintaana wuxu reer Buraan ku yidhi:
“Buurahan jinni baa isku baahinayee,
Buraan Herer ways bidhaanshaan,”
Heesaha kale ee uu beryahaa bariga loo beddelay tiriyay oo badnaa, waxa kale oo aynu ka soo qaadan karaynaa:
“Docmiyo bari baa I daashadayoo,
Dunida dabadeeda lay dirayoo,
Dayaxi waw galbeed dalkaan tegay,”
Sheekooyinka qaarkood ayaa odhanaya Axmed Saleebaan Bidde oo ka shaqaynayay Dayaxa ayaa ka cawday fogaanteeda, markaas ayuu Feysalna odhanayaa, halka aan joogo galbeed ayay u xisaabsan tahay.
Waxa kale oo buyuuddaa ka mid ahaa:
“Waddadaa bariyeey ku wewheshaday,
Warkiyo hayga goyn waraaqaha,”
Waxa kale oo aynu tusaale u soo qaadan karaynaa:
“Wiigganba War-idaad baan dul weehanayee,
Tanina ma Wadaamo-goobaa,”
Waxa kale oo aynu tusaale u soo qaadan karnaa buyuuddii ay ka mid ka ahaayeen:
“Ciyaartaan bartiyo casrigii ka imee,
Ceel Af-weyn caano geel ma yaallaan,”
Waxaynu xagga danbe mowduuc gaar ah kaga dhigan doonnaa saamayntii suugaaneed ee uu Feysal Cumar Mushteeg ku lahaa geeddi-socodkii iyo sooyaalkii taariikheed ee Qaraamiga.